Abona babukeli beefoto zibalaseleyo ze-10 zokutshintsha usetyenziso lweWindows kwiEmulator.online ▷ 🥇
Windows 10Isibukeli sefoto somthonyama asithandwa kakhulu kubasebenzisi benkqubo. Ngokuyintloko, ngenxa yokucotha ukuvula imifanekiso kunye nokuhambelana nefomathi ezimbalwa. Kwakhona, imisebenzi yokuhlela ekhoyo ithintelwe.
Ukuba ujonga ezinye iindlela kule nkqubo, sidwelise ababukeli bemifanekiso abali-10 abaphezulu abakhuphelayo kwiWindows PC yakho. Phuma!
1. Umbonisi womfanekiso weFastStone
Ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa, i-FastStone Image Viewer ikuvumela ukuba ujonge imifanekiso kwiscreen esigcweleyo, usondeze kwaye ujonge idatha ye-EXIF. Ukuhamba kwifolda kunokwenziwa kwimenyu ephezulu. Izixhobo ziyafumaneka kwibar ezantsi kwesikrini.
Iyahambelana neninzi yolwandiso, ikwabonelela ngemisebenzi yokuhlela. Oku kubandakanya ukuchuma, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, ukususwa kwamehlo abomvu, kunye nokulungiswa kwezibane. Kuyenzeka ukuba wenze izilayidi, faka izicatshulwa kunye nezitikha kwiifoto, phakathi kwezinye iindlela.
Umbonisi womfanekiso weFastStone (yasimahla): Windows 10, 8, 7, Vista kunye ne-XP.
I-Winaero inemisebenzi emininzi yokwenza useto lweWindows kunye neempawu. Phakathi kwabo, kukho ukhetho lokuzisa inkqubo yeklasikhi yokujonga iifoto Windows 10.
Ukwenza oku, vula inkqubo kwaye ukhangele Foto kwibhokisi yokukhangela. Cofa apha Fumana ii -apps zakudala / usebenze ngeFoto yeWindows verr. Emva koko uye ku Sebenzisa iPhoto yeWindows verr.
Uya kusiwa kuseto olungagqibekanga lwesicelo. Cofa usetyenziso oluchazwe kwiFoto Viewer, kwaye kuluhlu oluvelayo, yiya kuyo Windows Photo Viewer. Ewe kuya kubakho apho unokukhetha khona, njengeentsuku zakudala.
UWinaero Tweaker (simahla): Windows 10, 8 no-7
Enye yeenkqubo zonxibelelwano ezintle kuluhlu lwethu. I-ImageGlass ibonelela ngezixhobo kwabo bafuna umbukeli olungileyo womfanekiso, ngaphandle kokongezwa. Isicelo sikuvumela ukuba ujikeleze umfanekiso ngokuthe nkqo nangokuthe nkqo, kunye nokuhlengahlengisa ububanzi, ukuphakama okanye ukuhlala kwiscreen sonke.
Unokudibanisa ulwandiso kubahleli bemifanekiso ethile, umzekelo, vula iPNG kwiFotohop. Unokukhetha nokuba ubonise ibar yesixhobo, ipaneli ye-thumbnail, kunye nemvelaphi emnyama emnyama okanye etshekiweyo.
Inkqubo ixhasa iifayile ngaphezulu kweefomathi ezingama-70, ezinje ngeJPG, GIF, SVG, HEIC, kunye neRAW.
Umfanekiso weGlasi (simahla): Windows 10, 8.1, 8, SP1, 7
Ukukhanya, ukukhawuleza kunye nokusebenza ngamagama anokuchaza iJPEGView. Isicelo siqaqambisa umfanekiso, kunye nebar yesixhobo eneempawu ezincinci kunye nezicacileyo. Kuboniswa kuphela xa imouse ihamba phezu kwesikrini. Idatha malunga nefoto, kubandakanya i-histogram, inokujongwa ngokunqakraza unobumba i.
Ukuba uhambisa isalathi phantsi, ezinye iindlela ezinomdla zokuhlela ziboniswa. Phakathi kwabo, isixhobo sokuhlengahlengisa umahluko, ukuqaqamba kunye nokugcwala, ukutshintsha kwe-shading kunye ne-blur. Ixhasa ifomathi yeJPEG, BMP, PNG, WEBP, TGA, GIF kunye neTIF.
Jonga iJPEG (yasimahla): Windows 10, 8, 7, Vista kunye ne-XP
5. 123 Umbonisi weefoto
Umbonisi weefoto eziyi-123 umi ngaphandle ngenkxaso yeefomathi ekunzima ukuzifumana kwabanye ababukeli bemifanekiso yeWindows, njengeLIVP, iBPG kunye nePSD. Isicelo sikuvumela ukuba usondeze ngonqakrazo olunye kwaye unezindlela ezimfutshane ezinokusetyenziswa ngokulula.
Ukongeza, inemisebenzi eyahlukeneyo yokuhlela, enjengokucoca ulwelo, ukudibanisa umfanekiso, kunye nokufakwa kokubhaliweyo. Le nkqubo ikwaxhasa izandiso zoopopayi, ezinje nge-GIF, APNG, kunye neWebP. Icala elisezantsi kuphela kukujongana nohlobo lwentengiso oluhlawulelweyo kwiscreen sasekhaya.
123 Umbonisi weefoto (yasimahla): Windows 10 kunye no-8.1
I-IrfanView sisibukeli esinobunzima, ekulula ukusisebenzisa esinamaqhosha afikeleleka ngokulula okushicilela, ukukhupha inxalenye yomfanekiso, kunye nokujonga ulwazi lwe-EXIF. Inkqubo inefomathi yokuguqula umsebenzi, njengokuvela kwiPNG ukuya kwiJPEG ngokulula.
Ungafaka kwakhona i-watermark, ungeze imida, kwaye wenze izilungiso zombala. Ngokumalunga nokuhlela, umsebenzisi angaphinde enze ubungakanani kwakhona kwaye ajikeleze ifayile, afake izihluzo kunye neziphumo, kwaye atshintshe umbala omnye.
Inkqubo inokungabi yinto enomdla kwabo bangenamava okuhlela. Ukuyisebenzisa ngesiPhuthukezi, kuya kufuneka ukhuphele kwaye ufake ipakethi yolwimi efumaneka kwiwebhusayithi yonjiniyela. Kodwa inkqubo iyakhawuleza.
Umbono (yasimahla): Windows 10, 8, 7, Vista kunye ne-XP
Jonga ipakethe yolwimi
I-XnView lolunye ukhetho lomboniso weefoto oza nenani lezinto ezongezelelweyo. Nangona ayisiyiyo enye yezona ndlela zintle ngokubhekisele ekusebenzeni, iyahambelana neefomathi ezingaphezu kwama-500 kwaye ivumela iintshukumo zebatch. Phakathi kwabo, nika igama kwakhona kwaye uguqule iifayile ezininzi ngaxeshanye.
Unokwenza ubungakanani kwakhona kunye nokuhluma imifanekiso, uzobe kuyo, kwaye ulungise iliso elibomvu. Kukho ukubakho kokuhlengahlengisa imiba enje ngokuqaqamba, umahluko, ukugcwala, i-shades, phakathi kwabanye.
XnView (yasimahla): Windows 10 kunye no-7
Ikhaphukhaphu kwaye kulula ukuyisebenzisa, i-HoneyView ibalaselisa izinto ezisisiseko ezilindelweyo kumbukeli womfanekiso. Oko kukuthi, sondeza ngaphakathi nangaphandle, jikelezisa ifoto kwaye uye kwelandelayo okanye ubuyele ngaphambili.
Ulwazi lwe-EXIF lunokufumaneka ngokukhawuleza ngeqhosha phezulu ngasekhohlo kwesikrini. Ngaphandle kokuguqulwa kwefomathi yefomathi, inkqubo ikuvumela ukuba ujonge iifayile ezixineneyo ngaphandle kokuzicofa.
Jonga (yasimahla): Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista kunye ne-XP.
I-Nomacs ijongeka ngathi ikhumbuza umboniso wesithombe sodidi lwewindows. Ke ngoko, nabani na othanda inkqubo yeMicrosoft akufuneki abenobunzima bokusebenzisa esi sicelo. Ngokubonisa uqobo, ikuvumela ukuba utshintshe ngokulula imowudi phakathi kwescreen esigcweleyo, i-100% okanye eyokuqala.
Kuyenzeka ukuba ujikeleze, uhlaziye ubungakanani kwakhona kwaye utyale umfanekiso usebenzisa amaqhosha abonisiweyo. Isoftware ikwabonelela ngezixhobo ezahlukeneyo zokuhlela ezinje ngokulungiswa kwesaturation, ukwenziwa kwe icon yePC, kunye nokunye.
Abatyunjiweyo (simahla): Windows 10, 8, 7, Vista, XP kunye no-2000
10. Iifoto zikaGoogle
Umbonisi okwi-intanethi kuphela kuluhlu lwethu, Iifoto zikaGoogle zinokukhetha kwabo bathanda ukugcina zonke iifayile kwindawo enye. Isicelo seselfowuni sikuvumela ukuba ugcine ngokuzenzekelayo iifoto kwaye ufikelele kuzo kwisikhangeli.
Ukuba uyafuna, unokufaka kwakhona imifanekiso egcinwe kwiPC nakwiGoogle Drayivu kuhlobo lwenkqubo yewebhu. Inkonzo inokhangelo lwezihloko kunye neendawo kunye nezixhobo ezilula zokuhlela. Ikwanayo neendibano ezizenzekelayo kunye nezikhumbuzo zolo suku lunye kwiminyaka edlulileyo.
Yintoni enokuba sisithintelo kwabanye yimfuno yokunxibelelana kwi-intanethi ukuyisebenzisa.
Iifoto zikaGoogle (simahla): Iwebhu
Cwangcisa umbukeli omtsha wezithombe njengemiselweyo
IWindows ichaza inkqubo yenkqubo yemveli njengombonisi ongagqibekanga. Oko kukuthi, iya kusetyenziselwa ukuvula zonke iifoto ngokuzenzekelayo. Ukutshintshela kwinkqubo ekhutshelweyo, landela nje amanyathelo angezantsi:
1. Cofa ekunene umfanekiso, kwaye kwimenyu evulayo, cofa Vula nge;
2. Njengokuba ubukele umboniso kuluhlu olubonisiweyo, khetha Khetha esinye isicelo;
3. Ngaphambi kokucofa i icon icon, jonga ibhokisi ecaleni kwayo Soloko usebenzisa le nto isicelo sokuvula iifayile .jpg (okanye nantoni na eyandisiweyo yomfanekiso);
4. Ngoku, nqakraza kwinkqubo kwaye uqinisekise Kulungile.
Ukuba awukwazi ukufumana igama lenkqubo, skrolela ezantsi kuluhlu kwaye uye ku Usetyenziso olungakumbi. Ukuba awukwazi ukuyifumana, cofa Khangela esinye isicelo kule PC. Kwibhokisi evulayo, chwetheza igama lenkqubo kwibar yokukhangela.
Xa uyifumene, cofa kuyo emva koko ucofe iqhosha Vula. Emva koko phinda la manyathelo angentla, isicelo siya kufakwa phakathi kukhetho lwesicelo.
Abadlali bevidiyo abagqwesileyo kwiPC nakwiMac